မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန်များ ရောင်းရန် | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - မြေကျယ်ဝန်းပြီး အဆောက်အဦးသုံးလုံးပါ ဂရန်အမည်ပေါက်…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်သော ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန် တွင်တည်ရှိပြီး မြေဧရိယာ ၃ဧကနီးပါး(အမည်ပေါက်ဂရန်မြေ)…...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်သော ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန် တွင်တည်ရှိပြီး မြေဧရိယာ ၃ဧကနီးပါး(အမည်ပေါက်ဂရန်မြေ)…
Listed 27 September 2018
Advertiser : Ko Sai
Property ID: S-1144738
Office no : 09-795841839
ရောင်းရန် - ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ မြေကွက်ရောင်းရန်
မြေ(၁)ဧက၊ မြေဖို့အုတ်ခတ်ပြီး ရောင်း=7000 သိန်း...
မြေ(၁)ဧက၊ မြေဖို့အုတ်ခတ်ပြီး ရောင်း=7000 သိန်း
Listed 18 January 2018
Pyae Sone Real Estate…
Advertiser : Pyae Sone Real Estate…
Property ID: S-1148110
Mobile : 095180001,09402686489,09-264779900
Office no : 01-687944, 0973103030, 095405027, 0943153917,
ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုနု မြေ (1.4)ဧက(ပါမစ်) မြေဖို့၊ အုတ်ခတ်ပြီး ရောင်း 1ဧက 7000သိန်း...
ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုနု မြေ (1.4)ဧက(ပါမစ်) မြေဖို့၊ အုတ်ခတ်ပြီး ရောင်း 1ဧက 7000သိန်း
Listed 13 January 2018
Property ID: S-1147161
ရောင်းရန် - အနော်ရထာစက်မှုဇုန် အုတ်ခတ်ပြီး မြေကွက်ရောင်းရန်
မြေ(10)ဧက၊ အုတ်ခတ်ပြီး၊ ရောင်း(၁)ဧက=3200 သိန်း...
မြေ(10)ဧက၊ အုတ်ခတ်ပြီး၊ ရောင်း(၁)ဧက=3200 သိန်း
Listed 8 November 2017
Property ID: S-1128991
ရောင်းရန် - Toe Chae Zone-2 (တိုးချဲ့ဇုန်-၂)
*Location – Ga Yu Nar Street, South Dagon Township. *Price – 10000 Lakhs *Property Type — Shed *Area — 43560 sqft...
*Location – Ga Yu Nar Street, South Dagon Township. *Price – 10000 Lakhs *Property Type — Shed *Area — 43560 sqft
Ga Yu Nar Street (ဂရုဏာလမ်း)
Property ID: S-1186863
ရောင်းရန် - Code-7406 သီလဝါဇုံတွင် 1.8 ဧက အကျယ်ရှိ မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
ကျောက်တန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Property ID: S-1186466
Asking Price : 6,660 သိန်း
ရောင်းရန် - Indutrial Zone-144 (စက်မှုဇုန်-၁၄၄)
*Location – Industiral Zone-144, South Dagon Township. *Price – 1000 Lakhs *Property Type — Garage *Area — 2400 sqft...
*Location – Industiral Zone-144, South Dagon Township. *Price – 1000 Lakhs *Property Type — Garage *Area — 2400 sqft
Yoma Yeikthar Street (ရိုးမရိပ်သာလမ်း)
Property ID: S-1185935
ရောင်းရန် - Warehouse Sale in South Dagon (ID-250)
Warehouse for sale in South Dagon industrial zone. Land area -3acres Warehouse area - 20000 sqft and 11200 sqft. Transformer - 315 KVA Sale price - 28000 Lakhs (Nego) Warehouse Sale in South Dagon (ID-250) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price…...
Warehouse for sale in South Dagon industrial zone. Land area -3acres Warehouse area - 20000 sqft and 11200 sqft. Transformer - 315 KVA Sale price - 28000 Lakhs (Nego) Warehouse Sale in South Dagon (ID-250) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price…
Property ID: S-1177858
Asking Price : 28,000 သိန်း
ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ ဇုံ ၁(09 977901500 ,09 977901506 , 09 455018076)
မြေအကျယ် ၁ဧက နီးပါး၊ 315Kva, 120×160ဂို အငှါးခေါင်းပြောင်း ယူနိုင်ရမည်။ 09977901502...
မြေအကျယ် ၁ဧက နီးပါး၊ 315Kva, 120×160ဂို အငှါးခေါင်းပြောင်း ယူနိုင်ရမည်။ 09977901502
Property ID: S-1183358
ရောင်းရန် - warehouse
Property ID: S-1183298
ရောင်းရန် - Code-6839 သာကေတမြို့နယ်တွင် ဂိုဒေါင်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Listed 12 December 2018
Property ID: S-1183113
ရောင်းရန် - ​ကြော်​ငြာ အမှတ်​စဉ်​ (120)*​ ​ဒဂုံဆိပ်​ကမ်း စက်​မှုဇုံ…
​မြေအကျယ်​အဝန်း = (4)ဧက ပိုင်​ဆိုင်​မှု = ဂရံ သစ်​လုပ်​ငန်း လိုင်​စင်​ရ။ ...
​မြေအကျယ်​အဝန်း = (4)ဧက ပိုင်​ဆိုင်​မှု = ဂရံ သစ်​လုပ်​ငန်း လိုင်​စင်​ရ။
Listed3December 2018
Property ID: S-1182094
ရောင်းရန် - ဒဂုံဆိပ်​ကမ်းစက်​မူဇုံ။
Listed 30 November 2018
Property ID: S-1182000
ရောင်းရန် - Industrial Zone-2 (စက်မှုဇုန်-၂)
*Location – Industrial Zone-2, South Dagon Township. *Price – 3000 Lakhs *Property Type — Shed *Area — 7200 sqft...
*Location – Industrial Zone-2, South Dagon Township. *Price – 3000 Lakhs *Property Type — Shed *Area — 7200 sqft
Listed 26 November 2018
Zaw Kyi Street (ဇော်ဂျီလမ်း)
Property ID: S-1181657
ရောင်းရန် - ​ကြော်​ငြာ အမှတ်​စဉ်​ (88)*​ ​ရွှေလင်​ဗန်း စက်​မှုဇုံ ။…
​မြေအကျယ်​အဝန်း = (1.2)ဧက/ဂိုအပြည့်​နီးပါး မီး = (315) KVA ...
​မြေအကျယ်​အဝန်း = (1.2)ဧက/ဂိုအပြည့်​နီးပါး မီး = (315) KVA
Listed 24 November 2018
Property ID: S-1181530
ရောင်းရန် - ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုံ ရှေ.ရှိ ဘိုးဘွားပိုင် လယ်မြေ ( ၄…
ဘိုးဘွားပိုင် လယ်ယာမြေ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရာင်းရန်ဖြစ်သည်။ လှိုင်သာယာမြို. လမ်းမကြီးဖြစ်သော အနော်ရထာ လမ်းမကြီးဘေးကပ်ရပ်တွင်တည်ရှိခြင်း၊…...
ဘိုးဘွားပိုင် လယ်ယာမြေ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရာင်းရန်ဖြစ်သည်။ လှိုင်သာယာမြို. လမ်းမကြီးဖြစ်သော အနော်ရထာ လမ်းမကြီးဘေးကပ်ရပ်တွင်တည်ရှိခြင်း၊…
Naing Lin Htwe
Advertiser : Naing Lin Htwe
Property ID: S-1181345
Office no : 09448007520
ရောင်းရန် - ရွှေပြည်သာ စက်မှုလမ်းမကျောကပ် ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော ဂိုဒေါင်…
ရွှေပြည်သာ စက်မှုလမ်းမကျောကပ်2ဧကခွဲ 2RC , ဂိုဒေါင် ၄ လုံးပါ၊ - 38000 Lks...
ရွှေပြည်သာ စက်မှုလမ်းမကျောကပ်2ဧကခွဲ 2RC , ဂိုဒေါင် ၄ လုံးပါ၊ - 38000 Lks
Listed7November 2018
Property ID: S-1125922
Asking Price : 38,000 သိန်း
ရောင်းရန် - ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုံရှိရောင်းရန်ရှိသောမြေကွက်နှင့်အဆောက်အဦး(Malihku…
ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုံ ၊ ၆၅x၁၀၆ ၊ ဂိုဒေါင်ပါ ၊ စက်မှုဇုံဂရံ ၊ ရေမီး သိန်း ၄၅၀၀ Contacts us; 09-264009898 , 09-264009797 , 09-264009696...
ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုံ ၊ ၆၅x၁၀၆ ၊ ဂိုဒေါင်ပါ ၊ စက်မှုဇုံဂရံ ၊ ရေမီး သိန်း ၄၅၀၀ Contacts us; 09-264009898 , 09-264009797 , 09-264009696
Property ID: S-1180641
ရောင်းရန် - တောင်ဒဂုံတိုးချဲ့စက်မှုဇုံ၂ရှိရောင်းရန်ရှိသောမြေကွက်နှင့်အဆောက်အဦး(Malihku…
တောင်ဒဂုံတိုးချဲ့စက်မှုဇုံ၂ ၊ ကညနရုံးအနီး ၊ ၂.၅ဧက ၊ ဂိုဒေါင် ၂၀၀၀၀ စတုရန်းပေ ၊ စက်မှုဂရံ ၊ ရေမီး သိန်း ၁၅၀၀၀ (၁ဧကခြင်းလဲခွဲရောင်းသည်…...
တောင်ဒဂုံတိုးချဲ့စက်မှုဇုံ၂ ၊ ကညနရုံးအနီး ၊ ၂.၅ဧက ၊ ဂိုဒေါင် ၂၀၀၀၀ စတုရန်းပေ ၊ စက်မှုဂရံ ၊ ရေမီး သိန်း ၁၅၀၀၀ (၁ဧကခြင်းလဲခွဲရောင်းသည်…
Property ID: S-1180638
ရောင်းရန် - ငါးပိငါးခြောက်ဇုန်(၂)
Listed 27 October 2018
Advertiser : Zar Ni
Property ID: S-1180181
Office no : 09978115007
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်စက်မှုဇုန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
အလုံ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဗဟန်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဗိုလ်တထောင် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ကိုကိုးကျွန်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဒလ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဒေါပုံ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
လှိုင် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် လှိုင်သာယာ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် လှည်းကူး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မှော်ဘီ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ထန်းတပင် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် အင်းစိန် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ကမာရွတ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ကော့မှုး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ခရမ်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ကွမ်းခြံကုန်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ကျောက်တံတား ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ကျောက်တန်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
ကြည့်မြင်တိုင် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် လမ်းမတော် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် လသာ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မရမ်းကုန်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မင်္ဂလာဒုံ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မြောက်ဥက္ကလာ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ပန်းပဲတန်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ပုဇွန်တောင် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် စမ်းချောင်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဆိပ်ကမ်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
ရွှေပြည်သာ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် တောင်ဥက္ကလာ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် တိုက်ကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် တာမွေ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် သာကေတ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် သံလျင် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် သင်္ဃန်းကျွန်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် သုံးခွ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် တွံတေး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ရန်ကင်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ရွှေပေါက်ကံ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ကယားပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မွန်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် နေပြည်တော်ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်